Tarika Vintsy - Tononkira Malagasy - serasera.org
Tamin'ny : 26/10/2001 20:10:13
Ny Tarika Vintsy dia manana ny maha-izy azy tokoa. Mafonja dia mafonja ny tononkirany. Tsy dia taitra loatra tamin'ny fankalazana izy, fa nankafy fotsiny izao ny Ara. Mihira ny fiainana an-davanandron'ny gasy izy.
Donatia (12/02/2010 11:59:44)
Efa ela tokoa no tsy naharenesana ny tarika vintsy, ato ho ato anefa dia hisy ny zavatra izay ho entiny ho antsika araky ny resaka heno tamin'ny iray izay mitarika io groupe io, ny mozika ntsy ajanona fa ny fotoana hanaovana azy no mbola nisy tsy nahanety azy kely